XASAASI:- Maxuu Nabad Iyo Nolol uga Doorsaday xilkiisa shariif Xasan Shiiq aadan ! – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Ahmed weheliye Gaashaan 7 November 2018 7 November 2018
Baydhabo (Mareeg News ) Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa goor dhow magaalada Baydhabo kaga dhawaaqay inuu iska casilay xilka Madaxweynaha Koofur Galbeed, kaddib cadaadis siyaasadeed oo maalmihii la soo dhaafay la kulmayay.
Shabakadda Mareeg.com ayaa si rasmi ah u ogaatay inuu Shariif Xasan Shiikh Aadan Dowladda Soomaaliya ka qaatay lacag 4 malyan oo Dollarka Mareykanka ah si uu xilkaas isaga casilo.
Dowladda ayaa wafdi Xildhibaano ah Shariif Xasan ugu dhiibtay markii ugu horeysay lacag gaareyso illaa 2 Malyan waxaana lagu balamay in labada Malyan ee kale la siiyo marka uu is casilo kadib.
Markii uu Shariif Xasan qaatay labada Malyan ayuu bilaabay olole ka dhan ah Dowladda Soomaaliya, wuxuuna qaar ka tirsan Guddigii Doorashada ku qalqaaliyey inay is casilaan kadib markii uu siiyey lacag waali ah.
Sidoo kale wuxuu kiciyey odayaashii dhaqanka isagoo adeegsanayo lacagtii uu Dowladda Soomaaliya ka qaatay.
Markaas kadib Dowladda iyo Shariif Xasan ayaa wadahadal kale bilaabay, waxaana lagu eedeeyey inuu ballantii ka baxay balse wuxuu ku dooday inuu is casili doono haddii labada Malyan ee kale loogu daro ka hor inta uusan is casilin.
Sidaasna ayaana Maanta loogu diray Wasiirka Arrimaha Gudaha oo waday lacagtii labada Malyan aheyd, wuxuuna sidaas ku qaatay lacag afar Malyan ah, waana sababta dhabta ah ee ka dambeysay inuu Shariifka is casilo.
Xogtaan ayaa waxaa Shabakadda Mareeg siiyey xubno si weyn ugu dhow Shariif Xasan Shiikh Aadan, waana xog 100% la isku haleyn karo.
Shabakadda Mareeg.com ayaa laba Maalin ka hor idinla wadaagtay inuu Shariif Xasan is casili doono halkaan hoose ka akhriso warbixintaas